वर्षायाममा दाल सेवन | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home गृहपृष्ठ वर्षायाममा दाल सेवन
वर्षायाममा दाल सेवन
दालविना भात खान मजा आउँदैन । रहर (अरहर)को दाल धेरैले मन पराउँछन् । कुनै पनि मौसममा दाल सेवन गर्न सकिन्छ । दाल स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ । तर केही दाल मौसम अनुसार खाँदा दुई गुना फाइदा हुन्छ । जस्तै वर्षायाममा मासको दाल खानुहुँदैन । मसुरीको दाल हाम्रो पेटको पाचनतन्त्रको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
मुंग–मसुरी मिसाइएको दाल कुनै पनि मौसममा खान सकिन्छ । विशेषगरी वर्षायाममा यो दालको मिश्रणले पेटलाई निकै फाइदा पु¥याउँछ । वर्षायाममा हाम्रो पाचनतन्त्र निकै कमजोर हुन्छ । मुंग–मसुरीको दाल सजिलै पच्छ । मुंग दालको असर चीसो हुन्छ, जबकि मसुरीको गर्म । यसैले मनसुनको सिजनमा यी दुई दाल मिसाएर खान सल्लाह दिइन्छ ।
सातामा जसले चार–पाँच पटक मुंग–मसुरी मिश्रित दाल खान्छ, उसलाई निकै फाइदा हुन्छ । मुंग–मसुरीको मिश्रण दाल लो–पैmटको राम्रो स्रोत हो, यसले मुटुसम्बन्धी रोग टाढा राख्छ । यस दालले मधुमेह पनि नियन्त्रित गर्छ । यसको अलावा मुंग–मसुरीको दालमा आयरन जिङ्क हुन्छ जसले शरीरमा रगत बढाउने काम गर्छ । शरीरको शक्तिको लागि यो दाल सेवन गर्नुपर्छ ।
पाचन खराब भएपछि बान्ता हुने, पखाला लाग्ने, पेट दुख्ने, कब्ज, अपच, ग्याँस, पेट फुल्ने समस्या हुन्छ । चिकित्सकले मुंग–मसुरी खान सल्लाह दिन्छन् । यस दाललाई पातलो बनाएर खाएपछि सजिलै पच्छ ।
मनसुनमा कब्ज भएपछि के गर्ने ?
वर्षायाममा पेटसम्बन्धी समस्या जस्तै– कब्जियत, एसिडिटी, पेट दुख्ने गर्छ भने दिनभरिमा सात–आठ गिलास पानी पिउनुपर्छ । यसले कब्ज हुन दिंदैन र र शरीरलाई हाइडे«ट राख्छ । जसको पेटमा सदैव ग्याँस बनिरहन्छ र कब्जियत भइरहन्छ उसले खानामा कागती, केराउ, कागती–पानी सेवन गर्नुपर्छ । पेटबाट ग्याँस निकाल्ने काम बदामले पनि गर्छ । यसका साथै बेरीजले पनि पेटसम्बन्धी समस्या निराकरण गर्न मदत पु¥याउँछ ।
Previous articleराति खाना नखाने बानी छ ?
Next articleआमा अनि श्रवण कुमार